ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ကျောင်းသားပါတီ (နှစ်ခက်တာ) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ကျောင်းသားပါတီ (နှစ်ခက်တာ)	Posted by mm thinker on January 9, 2008
Posted in: Experience, Tag.	Tagged: Tag.	3 Comments
တတိယရောက်လာတာက Eco ကျောင်းသူနဲ့ သူဖိတ်လာတဲ့ အမေရိကန်မဖြစ်သည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတက္ကသိုလ်က မဟာကျောင်းသူတဲ့။ သူချက်လာတာက ပုန်းရည်ကြီးနဲ့ ၀က်သား။ ၀ိုင်းကူဖို့ရောက်နှင့်နေသည့် မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တိုးတိုးပြောရင်း ရယ်ကြသည်။ `အရင်ရောက်တာက ကုလား၊ ချက်လာတာက ၀က်သား´ဟူ၍။ နောက်တော့ ခဏချင်းတဖွဲဖွဲရောက်လာကြသည်။ အခန်းကမကျယ်၊ ရောက်လာသူတွေက မနည်း။ အာရုံနောက်လာသဖြင့် အခန်းကို ခဏပြန်ခဲ့သည်။
ဟန်သစ်ငြိမ်နှင့် ဗီယက်နမ်တစ်ယောက်က ဂစ်တာတီးသည်။ အမေရိကန်မ၊ ဆရာပီတာနဲ့ ဘေးကလူတွေက သီချင်းဆိုကြ။ အလည်ရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ကောင်မလေးက ထမင်းကဗျာကယာထည့်ပေးသည်။ ၀က်သားဟင်းကတော့ ကုန်ပြီတဲ့။ အနောက်လေသာဆောင်မှာ မြန်မာကျောင်းသားတချို့ ဘီယာမော့နေကြသည်။ ကျနော်ကတော့ ထမင်းပန်းကန်တဖက်၊ ဘီယာတစ်ခွက် လက်ကဆွဲလို့။ ဟန်သစ်ငြိမ်က အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေ Print ထုတ်ပြီး စာအုပ်လုပ်ထားတော့ အိုကေနေတယ်။ Country သီချင်း Take Me Home ကတော့ တော်တော်ပွဲတောင်းကြသည်။ ဆရာပီတာကြီးက ရှေးခေတ်အင်္ဂလိပ်သံ အသံခါကြီးနဲ့ဆိုသည်။ နောက်တော့ ခရစ္စမတ်သီချင်း။
← New Present for WP Bloggers & Talking Blog Experiences	ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒ (Post-modernism)-အပိုင်း (၁) →	3 comments on “ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ကျောင်းသားပါတီ (နှစ်ခက်တာ)”
yamin on January 9, 2008 at 6:48 am said:
Reply	yamin on January 9, 2008 at 6:52 am said:
Reply	Yan on January 17, 2008 at 12:58 am said: